MoEngage: Fakafakao, fizarana, ampidiro ary ataovy manokana ny dian'ny mpanjifa finday voalohany | Martech Zone
MoEngage: Fakafakao, fizarana, ampidiro ary ataovy manokana ny dian'ny mpivarotra finday voalohany
Alarobia, Septambra 9, 2020 Alarobia, Septambra 9, 2020 Douglas Karr
Hafa ny mpanjifa voalohany. Na dia manodidina ny telefaona findainy aza ny fiainany dia mitsangantsangana eo anelanelan'ny fitaovana sy toerana ary fantsona koa izy ireo. Manantena ny mpanjifa fa hisy foana ny marika amin'ny dingana miaraka amin'izy ireo ary manafatra traikefa miavaka amin'ireo teboka mikasika ara-batana sy nomerika rehetra. Ny tanjon'ny MoEngage dia ny manampy ireo marika hamakafaka, hampisaraka, hanao ary hanokana ny dian'ny mpanjifa.
Fakafakao ny dia nataon'ny mpanjifa
Ny fahitana nomen'ny MoEngage dia manampy ny mpivarotra amin'ny fandefasana an-tsarintany ny dian'ny mpanjifa mba hahafahan'izy ireo miakatra an-tsambo, mitazona ary mampitombo ny sandan'ny mpanjifa tsirairay.
Fantsona fiovam-po - Fantaro ireo dingana marina izay ialan'ny ankamaroan'ny mpanjifa. Mamorona fanentanana hametahana ireo famoahana ary hamerina azy ireo amin'ny fampiasa amin'ny app anao, magazay, na finday ivelany.
Fironana amin'ny fitondran-tena - Fantaro ny fifandraisan'ny mpanjifa amin'ny fampiharana anao sy ny fanarahana ny KPI anao. Ampiasao ireo fomba fijery ireo mba hamoronana fampielezan-kevitr'olona tena kendrena.
Retention Cohorts - Vondron-mpanjifa mifototra amin'ny hetsika, demografika, toerana ary karazan-jotra. Fakafakao mandritra ny fotoana maharitra ny fihetsik'izy ireo ary fantaro izay mahatonga azy ireo hifikitra.
Sokafy ny Analytics - Angony sy tantano ny angona mpanjifa rehetra amin'ny toerana iray afovoany. Ampidiro amin'ireo fitaovana toa an'i Tableau sy Google Data Studio ho an'ny sary mora foana, tsy mila fitaovana ETL.
Source Analytics - Ampitahao amin'ny dashboard iray ny loharanom-pahalalana rehetra amin'ny mpanjifa. Mahafantatra mpanelanelana amin'ny fantsona avo lenta na fantsona ary ampifantoha amin'ireo tetibola ireo ny teti-bolanao.
Ampilaharo tsara ny mpihaino anao
Masinina fizarazarana tarihin'ny AI, izay mampizara roa ny mpanjifanao ho vondrona micro mifototra amin'ny fihetsik'izy ireo. Ankehitriny ianao dia afaka mankafy ny mpanjifa rehetra amin'ny tolotra manokana, tolo-kevitra, fanairana ary fanavaozana.
Fizarana mialoha - Ataovy ao anaty sokajy ny mpanjifanao toy ny tsy mivadika, mampanantena, atahorana, sns, miorina amin'ny fitondran-tenany. Mampiasà modely vinavina MoEngage hamantarana ireo mpanjifa mety hamaly amin'ny fampiroboroboana.
Fizarana manokana - Mamorona segondra bitika mifototra amin'ny toetran'ny mpanjifa sy ny fihetsik'izy ireo ao amin'ny tranonkalanao, mailaka ary fampiharana. Tehirizo ny ampahan'ny mpanjifanao ary avereno mamerina mamaky mora foana azy ireo mandritra ny androm-piainany.
Ampidiro amin'ny toerana misy azy ireo ny mpijery anao
Mamorona traikefa mpanjifa tsy misy tohika sy mifamatotra amin'ny fantsona sy fitaovana. Alao sary an-tsaina, forony ary ataovy mandeha ho azy ny doka fampihetseham-piainan'ny mpanjifa. Avelao ny motera AI MoEngage hamantatra ho azy ny hafatra mety sy ny fotoana mety handefasana azy.
Fitsangatsanganana - Tsy mora velively ny naka sary an-tsaina sy namorona dia nataon'i omnichannel. Miaraha amin'ny mpanjifanao isaky ny dingana rehetra ary ataovy mandeha ho azy ny dian'izy ireo manomboka amin'ny sambo mankany amin'ny fidirana mankany amin'ny tsy fivadihana maharitra.
Fanatsarana tarihin'ny AI - Amin'ny fampielezan-kevitra marobe, MoEngage's AI Engine, Sherpa, dia mianatra ny zava-bitan'ny variant tsirairay avy amin'ny fotoana tena izy ary mandefa ho azy ny varotra tsara indrindra ho an'ny mpanjifa rehefa tena mety hiova izy ireo.
Mandrosoa fampandrenesana - Mandresy ny famerana ny tambajotra, fitaovana ary OS ao anatin'ny ekosistema Android handefa ny fampandrenesanao manosika ny mpanjifa maro kokoa.
Fanatsarana ny tanana - Atsangano tanana ny fanandramana A / B sy Multivariate. Amboary ny vondrona fanaraha-maso, mihazakazaha fanandramana, refeso ny fisondrotana, ary avereno amin'ny tanana ny tanana.
Fahaiza-manao manokana amin'ny tsirairay
Mamorona traikefa manokana izay mandresy ny mpanjifa mandritra ny androm-piainana. Ankafizo izy ireo amin'ny tolo-kevitra sy tolotra mifanaraka aminy mifanaraka amin'ny safidiny, ny fitondran-tenany, ny demografika, ny tombotsoany, ny fifampiraharahana ary maro hafa.
Torohevitra manokana - Ampifanaraho amin'ny safidin'ny mpanjifa, ny fitondran-tena, ny fividianana entana ary ny toetranao ny vokatrao na ny katalaogin'ny atiny. Ankafizo izy ireo amin'ny tolo-kevitra izay hita eo akaiky eo.
Personalization amin'ny tranonkala - Ovao ny votoatin'ny tranokala, ny tolotra, ary na ny fisehon'ny pejy aza ho an'ny fizarana samihafa an'ny mpanjifa. Mametraha sora-baventy sy layout manokana izay miova miovaova arakaraka ny fihetsiky ny mpanjifa, ny demografika, ny safidiny ary ny zavatra mahaliana azy.
Hafatra eo an-toerana - Mialà amin'ny pop-ups an'ny tranonkala mahazatra. Amin'ny alàlan'ny fandefasan-kafatra an-tranonkala dia azonao atao ny manetsika ny pop-up an'ny tranonkala manokana miankina amin'ny fitondran-tena sy ny toetran'ny mpanjifa.
Geofencing - Miaraka amin'ny fahaizan'ny MoEngage's Geofencing, azonao atao ny mamoaka fampandrenesana mifandraika sy mifototra amin'ny toerana misy ny mpanjifanao ankehitriny.
Jereo ny fomba ahafahan'ny sehatra fifandraisan'ny mpanjifa MoEngage mampatanjaka ny paikadinao fitomboana.
tombony fahitana lalina kokoa amin'ny fomba fandraisan'ny mpanjifa ny fampiharana anao sy famoronana fanentanana tena kendrena.
mamorona fandefasan-kafatra manokana ary ny firotsahana an-tsehatra hanampiana ny mpanjifa amin'ny teboka maro mikasika.
Leverage AI handefa ny hafatra mety amin'izay fotoana izay, ary hamorona fanentanana marobe hanandramana ny variana tsara indrindra.
Tags: fizarana tarihin'ny aifironana amin'ny fitondran-tenafantsom-panovanafandalinana ny dia nataon'ny mpanjifafifandraisan'ny datavotoaty mavitrikageofencingfanatsarana ny diafitsangatsangananafanatsarana ny tananafivarotana marketing amin'ny findaymoengagefandefasana hafatra eo an-toeranapersonalizationfizarana mialohatolo-kevitra momba ny vokatrafanindriana fampandrenesanasegmentationloharanom-baovaopersonalization amin'ny tranonkala
Vuelio: ny sehatry ny fifandraisan'ny haino aman-jery sy ny fampiroboroboana